Lamaanaha iyo Galmada: Warbixin Ragga | Ragga leh Qaabka (Bogga 2)
Waa maxay jacaylka lamaanaha
Sidee loo qeexaa jacaylka lamaanaha? Dareenka noocan oo kale ah ayaa aad uga badan mid rasmi ah, laakiin si aan u kala saarno waxaan u sharaxnaa sida ay tahay inay dareemaan.
Waa maxay sasabasho?
Qiimee waxa sasabadu u eg tahay iyo wax kasta oo ku dhaca saamaynta noocan ah. Shaki la'aan, waa mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee lagu guuleysto qofka.
30 waxyaabood oo la sameeyo taariikhda ugu horeysa
Haddii aadan aad u cadeeynin sida loo abaabulo taariikhda ugu horeysa, maqaalkan waxaan ku siineynaa tiro badan oo ah fursadaha dhammaan noocyada kala duwan.
Mawduucyada wada sheekeysiga si aad u shukaansato
Inaad wada hadal la bilowdo qof aad jeceshahay way sahlanaan kartaa haddii aad isticmaasho qaar ka mid ah talooyinka aan halkan ku tusinno.
Sida loo helo lamaane deggan
Dad badan ayaa diiradda saara raadinta jacaylka noloshooda, taasna waxay isweydiiyaan waxa ama sida loo helo lammaane deggan.
waa maxay pansexuality
Waxaan haynaa hab cusub oo lagu qeexo jihaynta galmada. Waxaan ka hadleynaa pansexuality, oo ay abuureen afka dad badan oo caan ah,…
Waa maxay horudhac
Lammaanayaal badan ayaa xiriirkooda galmo u isticmaala ciyaarta horudhaca ah. Soo ogow waxa ugu xiisaha badan wakhtigan xiisaha badan.
Haddii aad rabto inaad si faahfaahsan u ogaato waxa ay la macno tahay "dareen" qof, halkan waxaanu ku faahfaahinaynaa sida dadku u dhaqmaan iyo waxay dareemayaan.
Waa maxay xiriirka saaxiib
Dhalinyaro iyo dhalinyaro badan ayaa dhista xiriir la soo bandhigay: saaxiibo. Ogow waxa ay ka dhigan tahay.
maxay tahay in ay dadban
'Being pasive' waa erey loo isticmaalo hab-dhaqanka loo isticmaalo galmada, ka hor inta aadan awoodin inaad u qalanto waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad akhrido macnaha.
Waxay u muuqan kartaa wax aad u fudud, laakiin sida loogu sheego qof inuu ku jecel yahay waxay noqon kartaa caqabad weyn oo halkan waxaan ku siinaynaa xalka.
Haddii ay weli kugu adag tahay inaad hesho lammaane, halkan waxaan ku siinaynaa dhammaan furayaasha si aad u ogaato sida loo yeesho saaxiib.
Calaamadaha aad hore u ahaan jirtay in aanu ku iloobin
Haddii aad rabto in aad ogaato dhammaan calaamadaha si aad u ogaato haddii qofkaagii hore aanu ku iloobin, akhri qoraalladayada si aad si fiican u fahamto maskaxdiisa.
Haddii aadan weli ku bilaabin shumis, halkan waxaan ku tusineynaa sida loo dhunkado markii ugu horeysay argagixin.
Soo ogow furayaasha ama sababaha si aad u caddeyso sababta ninku uga fogaado haweeneyda uu jecel yahay. Waa sababo kaa caawin doona inaad fahanto.
Sida loo yeesho xidhiidh caafimaad qaba
Soo hel dhammaan tayada ay tahay in la ilaaliyo si loo rasmiyeeyo xiriir caafimaad qaba. Nolol farxad leh oo lamaane ah ma aha mid adag.
Haddii aad jeceshahay inaad ku bixiso wax yaab leh halkan waxaad haysataa soo jeedin qumman. Waxaan kugu martiqaadeynaa sida loo qurxiyo qolka jacaylka ee nin.
Haddii aad xiisaynayso inaad ogaato waxa laabta xooggan ee nin ka dhigan tahay, halkan waxaan ku siin doonaa furayaasha ugu fiican si aad u gasho dareenkiisa.
Waxaa jira tilmaamo iyo tibaaxo badan oo lagu dabaqi karo si loo muujiyo "waan ku jeclahay" adigoon dhihin. Halkan waxaan ku siinaynaa qaar ka mid ah foomamkeeda.
Masayrku waa dareen aan la xakamayn karin oo ku jira lammaanayaal badan. Si loo xakameeyo, waxaad akhrin kartaa doorashooyin badan oo aan soo jeedinno.
Haddii aad rabto in aad dabka ku sii noolaato xiriirkaaga, halkan waxaan ku siineynaa qaar ka mid ah furayaasha ugu fiican ee aad ku faraxsan tahay lammaane ahaan.
Sida loo iloobo qof aan ku jeclayn waxay noqon kartaa caqabad weyn oo nolosha ah, laakiin wax walba kuma dhammaadaan halkaas, halkan waxaan ku siinaynaa talada ugu fiican.
Ninka guursaday muxuu sameeyaa markuu naag kale jeclaado? Ragga leh Style-ka waxaan kuu sheegaynaa wax walba oo aad sameyn karto iyo sababta.
Waxaa jira farsamooyin badan oo qarniyo badan la isticmaali jiray si nin looga guuleysto. Hadda waa inaad ogaataa waxa shaqeeya.
Xiriiro badan, haweeneyda ayaa laga yaabaa inay isku aragto inaan la hubin in ninkeeda uu ka daalay iyo in kale.
Sida loo ogaado haddii aan leeyahay frenulum gaaban
Rag badan ama dhalinyaro badan ayaa la ildaran frenulum gaaban iyada oo aan la hubin in ay iyagu hagaajin karaan. Kuwa kale…
Sida wiilka looga dhigo jaceyl
Haddii aad tahay mid dabiici ah, oo ay ka buuxaan shucuur togan oo aad had iyo jeer leedahay dhoola cadeyn qurux badan, waxaad haysataa wax kasta oo aad ku sameyso wiil jacayl. Ogow!
Haddii aad mar uun jabtay ama aad rabto inaad ogaato sidaad u sii wadi lahayd joogtaynta xiisahaaga, halkan waxaan ku siinaynaa talooyin si aad wiil jacayl uga dhigto.
Haddii aad xiisaynayso inaad ogaato dhammaan talooyinka ku saabsan sida loo shukaansado gabadh, halkan waxaan ku siinaynaa kuwa aadan iska dhigi karin si aad u noqoto nin jilicsan.
Mawduuca sasabashada wuxuu u noqon karaa farshaxan dhammaan dadka aan dhib ku qabin abuurista ...
Qofka aad jeceshahay ma ku eegaa oo si dhaqso ah ma u fiiriyaa? Soo ogow sababta uu u sameeyo iyo dareenka uu indhihiisa ku muujiyo.
Haddii aad jeceshahay inaad ogaato sida haweenku u dhaqmaan, soo ogow macnaha ay leedahay marka uu ku eego oo dhoola cadeeyo.
Haddii aadan i jeclayn, maxaad sidaas iigu fiirinaysaa? Soo ogow mid ka mid ah ifafaalaha keenaya hubin la’aan badan qof kasta iyo waxa sababa.
Ogow waxa ay ka dhigan tahay marka haweeneydu aad u eegto indhaheeda. Illaa iyo hadda waxaan ognahay inay tahay dulsaar laakiin waa inaan ku darnaa hab -dhaqankeeda.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa talooyinka iyo tabaha ugu fiican ee lagu barto sida loo soo jiito. Qaado dumarka oo dhan!
Marka haweeneydu kuu sheegto arimaheeda, waa sababta oo ah waxay rabtaa inaad ku xirnaato iyada oo ay ku danaynayso. Haddii aad rabto inaad wax badan ogaato, gal oo soo ogow.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxa la siinayo haweeneyda iyo maxay yihiin fikradaha ugu wanaagsan ee loogu talagalay.
Maxay ka dhigan tahay marka haweeneydu indhaha ku eegto? Soo hel dhammaan jawaabaha quruxda badan ee ku dhaca shakikan ragga dhexdooda ah.
Duugista qanjirka 'Prostate'
Soo ogow dhammaan faa'iidooyinka uu nin ka heli karo duugista suuxinta. Waxaad la yaabi doontaa waxaad baran karto.
Qofku wuxuu leeyahay soojiidasho mararka qaarna waxay dhacdaa inuu isagu aniga i jecel yahay kuwa kalena wuu iska indho tirayaa. Si aad uga baxdo shakiga, na aqri si aan uga baxno shakigaas farxadda leh.
Sideed ku ogaaneysaa in nin gabar saaxiib leh uu ku jecel yahay? Waa mid ka mid ah su'aalaha naga dhigi kara shaki, laakiin halkan waxaan dib ugu eegeynaa dhammaan waxyaabaha aan la aqoon.
Sida loo ogaado in lammaanahaagu ku jecel yahay
Waa hubaal inay jiraan hubanti la’aan waxaadna u baahan doontaa inaad ogaato haddii lammaanahaagu runtii ku jecel yahay. Tan awgeed waxaad ka akhrisan kartaa dhammaan furayaasha aan faahfaahinno.
Soo hel faahfaahin muhiim ah oo ay tahay inaad tixgeliso si aad u guuleysato haweeney oo aadan ugu lumin isku dayga.
Qormadan waxaannu kuugu sheegaynaa sidii aad lammaanahaaga dib ugu heli lahayd iyo waxa ugu fiican ee ay ku habboon yihiin. Waxbadan ka baro halkan.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa sida loogu kiciyo haweeneyda talooyinka iyo tabaha ugu fiican. Waxbadan ka baro halkan.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax walboo aad ubaahantahay inaad ogaato si aad meesha uga saarto shakiga ah "muxuu rafiiqeygu ila sameyn waayey qorshooyinka".
Falanqee dhammaan faahfaahinta, calaamadaha ama tilmaamaha uu ninku muujin karo oo uu ogaan karo inuu ku jecel yahay. Dhammaan tilmaamahan ayaa go'aamin doona-
Haddii aad ku jirto xiriir jaceyl oo aad ka shakisan tahay in lamaanahaaga uu ku jecel yahay laakiin uusan kuu sheegin, halkan waxaad ku ogaan doontaa calaamadaha aad leedahay inaad aqoonsato.
Gaalnimo shucuur waxay noqon kartaa xaalad aad uga khatar badan gaalnimada jirka lafteeda, raadso sida looga gudbo.
Qormadan waxaan kuugu sheegaynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato wax ku saabsan faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka aad kula soo noqon karto qofka aad ka soo tagtay. Ogow saynisku wuxuu leeyahay.
Qormadan waxaan ku tusi doonaa kuwee ugu wanaagsan labada lamaane ee kiciya xiriirka galmada iyo xoojinta xiriirka.
Waxaan kuu sheegeynaa waxa ugu fiican ee tabaha iyo tabaha si aad u barato waxa gabadha looga hadlayo. Waxbadan ka baro halkan.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa qaar ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee lala sameeyo lamaanahaaga si aad ugu raaxaysato kuna xirnaato.
Waxaan kaa dhigeynaa isbarbardhiga ragga masturbatarka ugu fiican ee ka socda Diversual. Baro faa'iidooyinkeeda iyo isticmaalkeeda.
Waxaan kuu sheegeynaa furayaasha iyo tilmaamaha ugufiican ee aad ku baran karto sida loo sameeyo haweeney adag oo jaceyl ku dhacda. Halkan ka baro dhammaan waxa ku saabsan
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato noocyada dhunkashada ee kala duwan iyo ujeeddada mid kasta oo ka mid ah la siiyo.
Fayraska 'Human Papilloma Virus HPV' waa mid ka mid ah cudurrada ugu badan ee galmada lagu kala qaado. Waxaan ku siinaynaa tilmaamaha ugu fiican ee lagu ogaan karo.
Waxaan kuu sheegaynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxa ragga ka fikiraan iyo runta ka dambeysa khuraafaadka ugu badan.
Dadku waxay leeyihiin awoodaas dabiiciga ah ee lagu saadaalin karo haddii qof na jecel yahay, iyo gaar ahaan dumarka waxay umuuqataa ...
Waxaan kuu sheegeynaa maxay yihiin tilmaamaha iyo tabaha ugu wanaagsan ee lagu barto sida loo kiciyo ninka. Ka dhig isaga inuu u riyaaqo sida ugu buuxda!
Soo ogow sida aad u kicin kartid ragga 'G-spot', oo ah xubin jilicsan oo u eg walnut oo aad ku ogaan karto galmadaada.
Waxaan kuu sheegeynaa waxa ay yihiin tilmaamaha iyo astaamaha ugu fiican ee ku saabsan sida lagu ogaado haddii haweeneydu ku jeceshahay. Waxbadan ka baro halkan.
Waxaan kuu sheegaynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato waxa nin doonayo. Baro falanqaynta buugaagta bulshada.
Waxaan kuu sheegeynaa talooyinka iyo tabaha ugu fiican ee lagu barto sida loola dhaqmo dumarka asturnaanta. Waxbadan ka baro halkan.
Waxaan kuu sheegeynaa talooyinka iyo tabaha ugu fiican ee aad ku baran karto sida faraha looga galiyo haweeney. Waxbadan ka baro halkan.
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato nooca jihada galmada iyo noocyada jira. Baro ixtiraamka dadka halkan.
Soo hel dhammaan faa'iidooyinka siigaysiga. Haddii aad tahay nin ama naag, siigaysigu wuxuu u fiican yahay jirkaaga iyo maskaxdaada.
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato rabitaanka galmada ee lamaanaha iyo sida loo xalliyo dhibaatooyinka la xiriira.
Waxaan kuu sheegeynaa kuwa ugu badan dhibaatooyinka kacsiga iyo sababaha iyo daaweynta.
Raadi waxa la siinayo haweeneyda loogu talagalay Kirismaska ​​2020
Farxad, nougat iyo hadiyado. Kuwani waa qaar ka mid ah maaddooyinka ugu wakiilka badan ee Kirismaska. Dad badan, marxaladda ...
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad tixgeliso si aad u baratid sida loo diyaariyo arooska. Baro abaabulka maalinta ugu fiican noloshaada.
Qormadan waxaan kuugu sheegeynaa maxay yihiin tilmaamaha ugu wanaagsan ee lagu baran karo sida loogu faraxsanaado lamaanahaaga. Caawi qofka aad jeceshahay.
Waxaan ku baraynaa talooyinka ugu fiican ee aad ku baran karto sida loogu shukaansado khadka tooska ah. Ogow khaladaadka ugu waaweyn si aadan u sameyn.
Aad bay u soo badaneysaa shukaansiga runtiina waxaan ognahay in jir ahaan sidoo kale ay tahay habka ugu fiican. Raadi tan adiga kuu fiican
Ninkee waligiis kuma riyoonin inuu u muuqdo inuu yahay nin qumman? Oo sidaas daraaddeed dhammaan ...
Taariikhda ugu horreysa waxay noqon kartaa khalad si aad u awoodo inaad sameyso aragti wanaagsan, soo hel waxa aad weydiisan karto kulankaaga ugu horreeya.
Sida loo ogaado haddii gabar xishood badan ay ku jeceshahay
Gabar xishood badan, oo la siiyay shakhsiyaddeeda, waxay ku siin kartaa calaamado yar oo ah dareemidda nooc kasta oo soo jiidasho ah oo wiil ah. Soo ogow waxa ku dhex jira.
Raadinta lammaane waa maaddo raaxo leh oo kaa dhigaysa inaad mar labaad ka fikirto dhalanteedka, waa inaad ku sameysaa taxaddar iyo halkan waxaan ku siineynaa tilmaamaha ugu fiican
Hadiyado aad u adag oo lab ah si ay si fiican ugu qaadaan xiritaanka
Soo ogow hadiyadaha kala duwan ee aad sameyn karto si aad u gaarto karantiil aad u badan oo loo dulqaadan karo. Kalidaa ku raaxee.
Sida loo daryeelo lamaanahaaga inta aad uurka leedahay
Sida loo daryeelo lamaanahaaga inta aad uurka leedahay waa dabeecadaas mahadnaqa ah si qofkaas aad jeceshahay uu kuu siiyo wax aad u yaab badan.
Demisexuality waa mid ka mid ah shuruudaha aan ku kala saari karno qofka jihada galmada. Raadi waxa ay dareemaan.
Waqti dheer la qaadashada lammaanahaaga ayaa caqabad weyn ku ah badbaadada. Waxaan soo jeedinaynaa sida aad ugu qaadan karto xabbinta lammaanaha aad uga wanaagsan.
Ku abaabulo baxsigaaga jacaylka ah talooyinkan la soo jeediyey iyo meelaha aad u socoto. Wax fikrad ah kama lihid waxa la siinayo? Halkan waxaan ku tusaynaa wax walba.
Ma aha kiiska ugu horreeya ama ugu dambeeya, ee ay laba qof isku dayaan inay xiriir dhow ka yeeshaan masaafo fog. Jacaylku wuxuu ...
Waan ognahay in kala taggu uusan ahayn mid ka mid ah daqiiqadaha ugu wanaagsan nolosha ee aan la kulmi karno, halkan waxaan kaa caawinaynaa sidii aad uga gudbi lahayd xaaladdan adag.
Qodobkaan waxaan ku sharaxeynaa qeybaha ugu muhiimsan ee sida loo ogaado haddii aad jeceshahay. Baro dareenkaaga oo cadee fikradahaaga.
Waxaan ku tusineynaa xoogaa soo-jeedin ah oo ku saabsan qorshooyin iyo hadiyado aad u sameyso lamaanahaaga maalinta Jacaylka. Dooro midka adiga kugu habboon adiga iyo lammaanahaaga.
Maqaalkani waxaad ku baran kartaa wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad ku tababarto oo aad ku raaxeysato muuqaalka 68. Halkan gal si aad wax badan uga barato.
Sidee naagta loo siigeysto
Qodobkaan waxaan ku sharaxeynaa tilmaamaha ugu muhiimsan ee lagu barto sida loo naasocdo haweeneyda loona siiyo raaxeysiga ugu badan. Halkan ka baro dhammaan waxa ku saabsan.
Halkan gal sababtoo ah waxaan kuu sharxeynaa talooyinka iyo tabaha ugu fiican si aad u ogaato waxa la siinayo gabadha saaxiibtaa. Ha ku dhaafin fikradaha hadiyadaha ugu fiican halkan.
Gali oo soo hel kuwa ugu fiican codsiyada maanta. Halkan ku ogow dhammaan faa'iidooyinka iyo astaamaha.
Qormadan waxaan ku soo qaadaneynaa gorfeyn dhammaystiran oo ku saabsan asalka cinjirka 'Mercadona', cinwaannadooda iyo isku halayntooda iyo waxtarkooda. Soo gal oo soo ogow.
Xiisada galmada ee aan la xalin waa rabitaanka labada qof waana wax ku dhaca bulshada maanta. Halkan ka baro sida loo garto iyo haddii ay tahay inaad xalliso.
Lammaanuhu waa shay ku dambeeya in la dayaco nolol maalmeed iyo waajibaad. Halkan ka ogow talooyinka ugu fiican ee ku saabsan sida aad lamaanahaaga uga yaabin karto.
Hiccups waa calaamadaha galmada iyo jacaylka ee loo sameeyay inay ku calaamadeeyaan dhulka ama muujiyaan xamaasad. Halkan ka ogow sida loo sameeyo hickey.
Biyo-baxa degdega ah waa dhibaato saameysa 30% ragga. Ma rabtaa inaad ogaato sida loo xaliyo? Halkan soo gal wax walbana waanu kuu sheegi doonaa.
Qoraalkan waxaad ku baabi'in kartaa dhammaan khuraafaadka ku saabsan precum iyo suurtagalnimada in haweeney uur yeelato. Ma rabtaa inaad wax walba ka barato?
Qaamuuska oo leh dhammaan muujinta caadiga ah ee haweenka taas oo macnaheedu yahay ka soo horjeedka waxa ay dhab ahaan sheegaan ... Ma ka daashay su'aalaha khiyaanada ama bixinta jawaabo qaldan? Soo gal adiguna mar dambe ma fashilmi doontid.
Soo ogow inay fiicantahay oo ay lagama maarmaan tahay inaad weyddiisatid lamaanahaaga waqtiga markay dhibaatooyin yimaadaan. Ma lagugula talinayaa inaad waqti la qaadato lamaanahaaga? Soo ogow waxa fiican iyo waxa xun ee aad go'aankan muhiimka ah labadiinaba u gaadheen.
Haddii aad tahay wiilka ugu quruxda badan xafiiska, haddii aad jeceshahay gabdhahaas oo u muuqda kuwa aan la gaari karin, shakigu waa inuu ku haasaawo ama lagu sasabo.
Noocee ah jacaylka noocan ah ayaad raadineysaa?
Ma runbaa inay jiraan noocyo jacayl ah? Shabakadaha bulshada waxaa ku badan "waan ku jeclahay", laakiin dhab ahaan taas uma jeedno.
Safarada kali, ka baxsan lamaanaha
Internetka waxaa jira soo jeedimo badan oo ku saabsan safarada kali. Kaliya ma safreyso, laakiin waxay la sameyneysaa dad kale oo aan lahayn lammaane, oo leh dhadhan isku mid ah.
Meelaha ugu haboon taariikhda ugu horeysa
Markay daqiiqadda runta timaaddo, kulanka ugu horreeya ee lala yeesho qofka aan dooneyno inaan la kulanno, shaki badan ayaa soo baxa. Xagee loo marayaa taariikhdaada koowaad?
Qoob-ka-ciyaarka sida hubka sasabashada
Sida noocyada xayawaanka qaarkood labku u soo jiito gabadha dhaaniska, aadamuhu kama duwana. Waxay noqon kartaa hub wanaagsan oo sasabasho ah.